Izy no miahy anareo… – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juin 22, 2012 juin 22, 2012 Laisser un commentaire sur Izy no miahy anareo…
« Ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra ; fa Izy no miahy anareo. Mahonona tena,miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany; tohero izy, ka miorena tsara amin’ny finoana hianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran’izao tontolo izao. » » Dia Izy no hahatanteraka sy hampihorina ary hampitoetra anareo. » 1Petera 5:7-10
Rehefa noraisintsika ho Tompo sy mpamonjy antsika Jesosy dia manana anjara amin’ny fitarihina, sy fiantohana ny fiainantsika Jesosy Kristy. Raha ny marina dia tokony Izy no mitaridàlana antsika. Raha tafasaraka Aminy isika dia maina, sahala amin’ny sampana amin’ny voaloboka tafasaraka amin’ny fototra dia maina ka ariana , atao fandretana afo sisa.
Tsy mipetra-potsiny Satana, mitady olona ho azy izy, ary tsy mba malemilemy na osaosa izy amin’izany fitadiavana izany, ary voalaza eto fa mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany: ny liona dia biby isan’ny matanjaka indrindra, sady masiaka, ary rehefa azony dia maty. Toa izany tokoa ny asan’i Satan: mitady antsika izy ho rembiny, harapany.
« Tohero izy »:raha ny herintsika amin’ny maha olona antsika dia ahoana no hahatanterantsika izany? Fa raha miankina amin’i Jesosy isika dia ho resy i Satana, tahaka an’i Daniela tao andavaky ny liona tsy nahasoka-bava hihinana azy ny liona.
Maro ireo andraikitra tokony ho raisintsika: Mahono tena, miambina, manohitra ny devoly, miorina tsara amin’ny finoana.
Tao ary fotoana mety nandehanantsika tamin’ny tsy fahononantena, ary mety ho tafalatsaka tamin’ny fanaranampo mihitsy aza, nandehanana tamin’ny danikibo; mety tsy niambina mihitsy; nefa mety niambina ihany nefa lasa tany amin’ny fahadisoandalana ihany; ary niahanahana ny finoana ary tsy hita hatramin’izay fiorenany. Toa tsaroantsika fa tena latsaka lalina ka very hatra- min’ny finoana kely nananana aza, ary dia tsaroana fa marary mihitsy ny finoana. Ary dia tsaroana fa tsy mihaino ny vavaka ataontsika Jesosy!
Toa mahatsiaro tena ho mitanjaka mihitsy isika noho ny faharatsiana vita!
Ka toa hiteny isika hoe tsy handray ahy intsony Jesosy!
Aoka isika hahatsiaro hiverina amin’i Jesosy Tompo! Amin’izany indrindra no ilantsika Azy. Tsy ny finaritra (salama) no mila mpanao fanafody fa ny marary!
Amin’ny fotoana sarotra amintsika indrindra no mila miantso ny Tompo isika.
Rehefa mahatsiaro tena ho tsy mahavita isika vao tena mila miantso an’i Jesosy. « Iza no Andriamanitra tahaka Anao, izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoan’ny sisa amin’ny lovany? »
Hafakely ny Andriamanitsika! Tsy misy Andriamanitra tahaka Azy.
Tsy mitana ny fahatezerany mandrakizay!
Jereo ny Teny eo ambony hoe: mbola miampy hoe
« FA IZY NO MIAHY ANAREO »
Miaraka amin’izany: Izy no manatanteraka sy manefa ny fiantsoana antsika, ka « Izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra antsika! »
Jesosy hampahery anao!
Publié parfilazantsaramada juin 22, 2012 juin 22, 2012 Publié dansUncategorized